Horudhac: Everton vs Liverpool… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Merseyside Derby ee maanta ka dhacaya garoonka Goodison Park) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
(Liverpool) 17 Okt 2020. Kani waa kulankii 288-aad ee Merseyside derby waxaana la filayaa inuu noqdo mid ka mid ah kuwii ugu xiisaha badnaa sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo kulankan oo qeyb ka ah horyaalka Premier League ay Everton garoonkeeda Goodison Park ku soo dhaweyso kooxda haysata horyaalka ee Liverpool maanta oo Sabti ah.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa safarka gaaban ku maraysa Stanley Park, iyagoo doonaya inay ka soo kabsadaan guuldarradoodii ugu xumeyd ebid ee Premier League ku soo gaarta, laakiin waxa ay ka hor’imaanayaan kooxda Everton oo hogaanka u haysa haatan horyaalka, taasoo ah kooxda kaliya ee adkaatay ama wada badisay afartii kulan ee illaa iyo haatan la ciyaaray horyaalka.
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 02:30 Duhurnimo xilliga geeska Afrika.
Labada laacib ee Everton, Yerry Mina iyo Lucas Digne ayaa la filayaa inay ka soo kabtaan dhaawacyo yar yar oo soo gaaray intii ay gudanayeen waajibaadka qarankooda.
Seamus Coleman, Allan iyo Andre Gomes ayaa dhammaantood waxa ay ku soo laabteen tababarka toddobaadkan, waana la tixgelinayaa inay kulankan ka qeyb qaataan.
Dhinaca kale Kooxda Liverpool ayaa heli doonin adeegga goolhayaheeda koowaad ee Alisson, waxaana shabaqa ugu bilaabanaya markale Adrian.
Sadio Mane iyo Thiago Alcantara ayaa qarka u saaran inay ku soo laabtaan garoommada kaddib markii ay is karantiileen sababtoo la xiriira caabuqa Korona Fayras oo laga helay, halka Joel Matip uu ku soo laabtay tababarka.
>- Liverpool ayaa rikoor kooxdeeda ah oo ah 22 kulan oo aan la garaacin tartammada oo dhan ka haysata kulankan ay wajahaan Everton, waxaana ay 22-kaas kulan garaacday 11 kulan, halka ay barbaro la gashay 11 kale.
>- Everton ayaa guul la’aan ah 19 kulan oo Premier League ay la kulantay Reds tan iyo guushii 2-0 oo ay gurigooda kaga gaareen bishii October ee sanadkii 2010-kii, tan iyo markaas waxaa ka soo gaaray dhinaca Liverpool 11 barbaro iyo 8 guuldarro.
>- Todobo ka mid ah saddeedii kulan ee horyaalka kulankan Merseyside derby, kaasoo ka dhacay garoonka Goodison Park ayaa ku dhammaaday barbaro, Liverpool ayaana guuleysatay kulanka kale.
>- Saddexdii kulan ee Merseyside derby oo ay Kooxda Everton marti gelisay ayaa ku dhammaaday barbaro.
>- Everton ayaa gool horyaalka ah ku dhalin la’ garoonkeeda, marka ay kulankan Merseyside Derby soo dhoweynayaan kooxda ay deriska yihiin lix saacadood iyo 45 daqiiqo.
>- Kani waa kulankii ugu horreeyey oo horyaalka ah ee Merseyside Derby, kaasoo dhacaya iyadoo Everton ay hoggaanka u hayso horyaalka tan iyo bishii September sanadkii 1989-kii.
>- Toffees ayaa guuleysatay todobadeedii kulan ee furitaanka tartammada oo dhan, markeedii ugu horreysay tan iyo kal ciyaareedkii 1894-95.
>- Everton ayaa guuleysan karta shan kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo todobo kulan oo xiriir ah oo ay adkaadeen intii u dhexeysay bilihii Maarso iyo Abril ee sanadkii 2014-kii.
>- 13 gool oo horyaalka ah ayaa lagu dhaliyay kaliya labo kulan oo ka dhacay garoonka Goodison Park xilli ciyaareedkan.
>- Waxa ay dhaliyeen 11 gool 12-koodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkooda ku ciyaareen kulammada horyaalka, marka laga reebo barbarihii goolal la’aanta ahaa ee ay la galeen Liverpool bishii June.
>- Dominic Calvert-Lewin ayaa dhaliyey sagaal gool lixdiisii kulan ee uu u ciyaaray kooxda Everton tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, mana jiro ciyaaryahan ka ciyaara shanta horyaal ee ugu caansan Yurub ee dhaliyay goolal ka badan inta uu dhaliyey xiddigan.
>- Calvert-Lewin ayaa noqon kara ciyaaryahankii ugu horreeyey ee kooxda Everton, kaasoo gool dhaliya shantiisa kulan ee ugu horreeya horyaalka tan iyo Tommy Lawton oo sidaas oo kale hore u sameeyey fasal ciyaareedkii 1938-39.
>- James Rodriguez ayaa gacan ka geystay lix gool shantiisii kulan oo uu u ciyaaray tartammada oo dhan, waxana uu u dhaliyey Toffees saddex gool, isagoo u sameeyey saddex caawin.
>- Kooxaha uu maamulo macallin Carlo Ancelotti ayaa shabaqooda gool ka ilaashaday shan ka mid ah lixdoodii kulan ee tartan rasmi ah ay garoonkooda ku soo dhoweeyeen oo ay wajaheen Liverpool, waxaana uu ka haystaa afar guul, hal barbaro iyo hal guuldarro.
>- Liverpool ayaa khasaaro la kulantay afar ka mid ah siddeedeedii kulan ee ay marti ahaayeen kulammada horyaalka, waana in ka badan inta ay la kulmeen 46 kulan oo markaas ka hor ay horyaalka ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Reds ayaa la kulmi karta guuldarrooyin xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii Sebtember ee sanadkii 2015.
>- Liverpool ayaa guuldarrooyin la kulantay horyaalka sanadkan 2020, waana in ka badan inta khasaaro oo ay la kulmeen marka la isku daro sanadihii 2018 iyo 2019.
>- Markii ugu dambeysay oo Reds laga dhaliyo 11 gool afar kulan oo ay ciyaareen waxa ay dib ugu laabanaysaa fasal ciayareedkii 1937-38.
>- Liverpool ayaa dhaliyey 23 gool tan yo bishii June markii dib loo bilaabay horyaalka Premier League, kaliya Crystal Palace oo 25 gool laga dhaliyey iyo Brighton oo 24 gool loogu shubay ayaa ka badan tan iyo waqtigaas.
>- Lixdii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaareen horyaalka Liverpool waxay dhaliyeen 34 gool.
>- Mohamed Salah ayaa dhaliyey 99 gool 158 kulan oo uu u ciyaaray Liverpool tartammada oo dhan, waxaana uu eegayaa inuu noqdo ciyaaryahankii 17-aad ee gaarta 100 gool ama boqol gool u dhaliya kooxdan.
>- Adrian ayaa shan qalad oo uu sameeyey goolal looga dhaliyey oo ay ka faa’iideysteen kooxaha ka soo horjeeda 21 kulan oo uu tartammada oo dhan u ciyaaray Liverpool.
>- Klopp waa guuldarro la’aan unbeaten 11-kiisii kulan ee uu ciyaaray kulammada Merseyside derbies isagoo macallin u ah Liverpool tartammada oo dhan, waxaana uu kulankan la kulmay 7 guul iyo 4 barbaro.